I just wanna save you!!Please have mercy on me!!! - Part5- Wattpad
မှိန်ပျပျမီးရောင်လေးထွန်းထားသော အခန်းကျယ်ကြီးရှိ king sizeမွေ့ရာပေါ်ဝင် ချိုက်မင်ထန်းတစ်ယောက် ဟိုလှိမ့်ဒီလှိမ့်နှင့်အိပ်မပျော်နိုင်ရှိနေသည်။အမှန်တိုင်းပြောရရင် ဂေဟာကိုသူလွမ်းနေပါသည်။အင်း....သူ့သူငယ်ချင်းကိုရောပေါ့........
လုံးဝအလင်းကြီးမထွန်းထားပဲ တမင်ပင်မီးအိမ်အသေးလေးထွန်းထားခြင်းမှာ အမှောင်ကြောက်လွန်း၍တော့မဟုတ် ပထမဦးဆုံး အိပ်ယာ အပြောင်းအလဲနှင့် စိမ်းသက်နေသေးသောဤနေရာတွင် အလင်းရောင်လေးအနည်းငယ်တော့ဖြင့် ရှိစေချင်သောကြောင့်ပင်......
သူမသိသည်သေးများကို  ဦးလေးလုကအသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်
အခန်းအပူချိန်မည်သို့ညှိနိုင်ကြောင်း၊ဂေဟာနှင့်မတူစွာ ခမ်းနားလှသောရေချိုးခန်းကို အသုံးပြု
ပုံနှင့် ယခုထွန်းထားသည့် မှိန်ပျပျ မီးအိမ်လေးအပါအဝင်ပင်ဖြစ်သည်။
အကျ်ီအဝတ်အစားများသည်ပင် သက်သက် တစ်ခန်းထားရှိသည်။
အရာအားလုံးသည် သူ့အတွက် ဆန်းကျယ်လှသည်။
ထိုအချိန်တွင် သူ့အခန်းတံခါးကို ဖွင့်ပြီး တစ်ယောက်ယောက် ဝင်လာသည်ကိုကြားလိုက်ရသည်။ ခြေသံသည်ကား ဖွဖွလေးလျှောက်လာသည်ဖြစ်၍ အသေအချာနားထောင်မှ ကြားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ချိုက်မင်ထန်းတစ်ယောက်အလွန်ထိတ်လန့်သွား၍ သူ့၏ ကြီးမားလှသောမျက်လုံးလေးများသည် ဝိုင်းစက်သွားသည်။
သူချက်ချင်းပင် အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်လိုက်သည်။စောင်အောက်တွင်ကားလက်သီးနှစ်ဖက်ကို တင်းတင်းဆုပ်ထားသည်။
*ဘယ်သူလဲ။ မွေးစားတဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့မှာတင် ငါအသတ်ခံရတော့မှာလား။ဂေဟာမှာကြည့်ဖူးတဲ့ ဇာတ်ကားထဲကလို ဗိုက်ကိုခွဲ ပြီး ကလီစာတွေ ရောင်းစားတော့မှာလား။ အဲ့ဒါကြောက့် မွေးစားတာလား*
ယောက်ယက်ခက်နေသော သူ့အတွေးများနှင့်အတူ တစ်စတစ်စ နီးကပ်လာသော ခြေသံ။
တကယ်က ထိုခြေသံပိုင်ရှင်သည် ပိုင်ချင်းယွီပင်ဖြစ်သည်။​ရောက်လာရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာကား သူ၏ ချစ်လှစွာသောဇာတ်ကောင်လေး
ချိုက်မင်ထန်းတစ်ယောက် အဆင်ပြေရဲ့လားဟု လာကြည့်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။